Izinzuzo Zokusebenzisa i-Global Media Network yeMidlalo Ebukhoma Egcwele - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni We-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » Izinzuzo Zokusebenzisa i-Global Media Network yemidlalo ebukhoma ephezulu
Izinzuzo Zokusebenzisa i-Global Media Network yemidlalo ebukhoma ephezulu
Ngemakethe yemicimbi yezemidlalo ebukhoma ephezulu iba yande umhlaba wonke, ukubaluleka kokusebenzisana nomlingani okufinyelelwayo kuya ngokuya kubaluleke kakhulu.
Ngenkathi imicimbi emikhulu yezemidlalo kukhalenda bekulokhu kuyizimpahla zomhlaba, abantu abanamalungelo baya ngokuya bethola isidingo emhlabeni wonke kuwo wonke amazinga ezemidlalo. Amaqembu nezinhlangano bayakwazi ukwakha ababukeli kude kakhulu kwezindawo zabo, baxhumane nabalandeli baphesheya kwezilwandle ngakolunye uhlangothi futhi bakhe ababukeli abasha ngakolunye. Ukusuka ubiquity wamahembe aphesheya kwezilwandle kulo lonke elase-Asia kuye ekudumeni okukhulu kwekhilikithi phakathi kwabalandeli bamazwe angaphansi e-USA, ezemidlalo yinto eyenzeka emhlabeni jikelele edlula ngale komjikelezo wemidlalo emikhulu nemidlalo.
Ixhuma ezemidlalo nezithameli
Ukulethwa kokuqukethwe okuvela e-USA kuphela kubalwa i-20% yemakethe yomhlaba, kanye nokuxhumana okunikezwa yiTelstra ukuya e-Asia nasemhlabeni jikelele ukuletha okuqukethwe kwezemidlalo nezokuzijabulisa kubabukeli bomhlaba jikelele. I-Telstra Global Media Network (GMN), kanye namanethiwekhi abalingani bethu, afinyelela ngaphezu kwamaphoyinti we-300 wokubakhona e-USA. Lokhu kunikeza ukufinyelela komkhawulokudonsa okuphezulu nokufinyeleleka okuqinisekisiwe, kuhlangabezana nekhwalithi yokuqhubeka kwensiza nezidingo zokuxhumana zokuqukethwe kwevidiyo ephezulu kakhulu. Izintambo zethu eziyisishiyagalombili ze-trans-pacific cable zixhuma i-United States nezimakethe zomhlaba jikelele ezibalulekile esifundeni sase-Asia-Pacific futhi zilethe i-20TB yamandla ekhebula ngaphakathi nangaphandle kwezwe.
Imakethe yase-US namandla ethu e-Asia yize kuyingxenye yesithombe. I-Telstra inikezela ngenethiwekhi yomhlaba wonke ebanzi engaphezulu kwamamayela we-250,000, ngokufinyelela ngaphezu kwamaphoyinti we-2,000 wobukhona emazweni angaphezu kwe-200 emhlabeni wonke. Siphinde futhi sinikeze ukuxhumana kwezikhungo zemininingwane ze-58 emhlabeni wonke ngesinye sezinyawo zemininingwane yedatha ehlanganisiwe esifundeni sase-Asia-Pacific. I-Telstra GMN Partner Alliance inikezela ngokufinyelela okwengeziwe kumaphuzu wokugcina we-2,500, kufaka phakathi amakhasimende emidlalo we-1,000 kanye nabezindaba, izindawo zezemidlalo eziphakeme ze-1,500, kanye nezindawo zokuxhumana zomhlaba ze-10.
Lokhu kusenza sikwazi ukuklama izixazululo zenethiwekhi yemidiya kuya kwezidingo eziqonde kakhulu, zokuhola imikhiqizo yezemidlalo nezinkampani. Sisebenzisane ne-WTA Media ukuklama inethiwekhi yomhlaba ehlukile ekwazi ukuletha ividiyo ezindaweni ezi-47-plus ze-WTA Tour emhlabeni jikelele. Lokhu kufaka ukuxhumana ku-fiber "okubili nokwahlukahlukene" okwenzelwe izidingo ezibucayi zevidiyo ebukhoma, enokwakhelwa kabusha komzimba kanye nezindlela ezimbili ezihlukile ngokwezindawo eziya kumahabhu we-WTA Media wokuqina nokuqina. Isihluthulelo sempumelelo yikhono le-fiber ukukala, okuvumela i-WTA Media ukumboza izehlakalo eziningi ngokufanayo, okuholela ekunwetshisweni kokuqukethwe kusuka kumidlalo ye-700 ngonyaka kuya ngaphezulu kwemidlalo ye-2,500 ngesizini eyodwa.
Inika amandla emisha
Siyazi ukuthi ezemidlalo zisakaza kanjani. Ukusuka ekuletheni izindlela ezingcono zokuletha okuqukethwe kusuka kuma-engles amakhamera ahlukile emicimbini emikhulu kusetshenziswa i-Globalbecam, ukubheka izehlakalo ezibukhoma kusuka esimeni sethu se-Telstra Broadcast Operations Center, noma ukusakaza okuqukethwe kuya e-Asia nangale, ubuchwepheshe bethu kwezemidlalo bunika amandla amasha kumakhasimende ethu e-Australia nasemhlabeni jikelele.
Akugcini lapho kuphela inethiwekhi yenethiwekhi yeTelstra iqinisekisa ukulethwa kwamavidiyo asezingeni eliphakeme, eliphansi lokusakazwa kwabasakazi kanye nezithameli, futhi kunika amandla iklayenti ekukhiqizweni kwekhaya. Ukusuka ekusebenzeni kwethu ne-Fox Sports Australia ne-NEP Australia ukukhipha i-Australia-wide Distributed Production Network (DPN) yokukhiqizwa okukude kwe-Tier One yemidlalo kusuka kwi-NEP Andrews Hub eSydney naseMelbourne, kuya endaweni yokuqala eyi-Trans-Pacific eqhelile ukukhiqizwa nge2018 phakathi kweSydney ne e-Los Angeles, lokhu sekuyinto esejwayelekile entsha. Kamuva nje, i-DPN yethu ihambise i-30 HD Ukuphilwa kwekhamera nemidwebo evela ku-June's World Relay Championship eJapan, i-8,000 km ukusuka eNissan Stadium eYokohama ngeTokyo kuya esikhungweni sokukhiqiza se-NEP Andrews eSydney.
Amandla okuthola amandla namandla wenethiwekhi yeTelstra futhi asenza sikwazi ukwenza amakhono kwezinye izindawo ezithakazelisa abasakazi bezemidlalo. Amakhamera ethu ekhamera ye-Globalbecam miniature, akhelwe ukubamba isenzo se-octane ephezulu yemicimbi yezemidlalo futhi anikeze isipiliyoni sokubuka esimila kakhulu. Ama-kits angasindi, acwebile futhi asebenzisa ubuchwepheshe obusha be-low-latency digital interface ukuthola nokwedlulisa okuqukethwe bukhoma ngqo kusuka kunkundla yokudlala noma enkantolo, noma ngabe kuthunyelwe njenge-RefCam, i-NetCam, i-UmpireCam, noma iHelmetCam, kuya ngomdlalo. I-Globalbecam ihlinzekwa njengensizakalo ephethwe futhi ingahle ihambisane nezidingo ngazinye zamakhodi wezemidlalo, abahleli bemicimbi nabasakazi.
Ikhwalithi Eqinisekisiwe Yensiza
Noma ngabe isetshenziswa isikhathi eside noma kwesinye isikhathi, ubukhulu nesilinganiso seTelstra Global Media Network kuhlangene nabalingani bethu kusho ukuthi sinamandla okuletha okuqukethwe kwakho ngekhwalithi yensiza eqinisekisiwe lapho futhi kudingeka khona. Sinesipiliyoni seminyaka sokuhambisa okuqukethwe ngaphakathi nangaphandle kwe-Asia - impela, sinethiwekhi enkulu kakhulu yamanethi amancanyana esifundeni sase-Asia-Pacific, afinyelela ku-30% wethrafikhi ye-Intanethi yesifunda futhi enikezela ukufinyelela kumandla we-intra-Asia lit - kanye nokubambisana kwethu kwenye indawo emhlabeni jikelele kuqinisekisa ukuthi sinikezela ngesisombululo somhlaba jikelele.
Umthamo wenethiwekhi yethu yisixazululo esifanelekile sokubhekela isidingo esifunekayo sokuqukethwe kwe-Ultra High Definition emakethe yezemidlalo, ngenkathi sinikezela ngokuxhumana okuqinile nokuxhumeka okuphansi okufunwa ukukhiqizwa kwasekhaya. Ivumela ukuxhumana ngqo nabasakazi abakhulu nezindawo ezinkulu emhlabeni jikelele, ngenkathi Isikhungo Sethu Sokusakaza Esisakazwayo emhlabeni wonke kanye namaRoad Rooms angeziwe e-Asia, e-USA naseYurophu aqinisekisa ukuthi konke okuqukethwe kubhekelwe futhi kulawulwa ubusuku nemini.
Ezemidlalo uthando lomhlaba wonke. Ukufinyelela izithameli ezikhulayo futhi uhlangabezane nesidingo esandayo sokuqukethwe okubukhoma kubalandeli emhlabeni wonke, okudingekayo kuyinsizakalo efinyelela, ibhendi nokuqina okuhlinzekwa yiTelstra Global Media Network.
Umlobi: u-Anna Lockwood, iNhloko YezokuThengiswa Komhlaba, Izinsizakalo Zokusakazwa kweTelstra - Inombolo yokuma kwe-IBC (uma ikhona): IHolo 14.F18
i-mLogic ne-axle ai inikezela nge-Smart mTape ™, isigcini semidiya esiphelele nokusesha inqwaba - Disemba 12, 2019
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Ama-spears nama-Arrows umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC Umlingisi wevidiyo	2019-08-19
Ngaphambilini: I-Blackmagic Design Live Production Workflow captures festival Beauregard
Olandelayo: Ngaphakathi Isikhathi sonyaka 4 se "Veronica Mars" (i-Article 2 ye2)